အနာဂတ်သတို့သမီးက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ (ယောကျာ်းလေးအတွက်) – Trend.com.mm
ဘယ်လို မိန်းခလေးမျိုးနဲ့ ဖူးစာကံပါမလဲ ဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့ ယောကျာ်းလေးအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အနာဂတ်ခန့်မှန်းကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကဲ…ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
မိမိမွေးသက္ကရာဇ်သိရုံနဲ့ တွက်လို့ ရပြီ။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ဖြစ်ရမယ်နော်။ မိမိမွေးသက္ကရာဇ်ကို ( ၄ ) နဲ့ မြှောက်၊ ရလာတဲ့ အဖြေကို ( ၇ ) နဲ့ စားပြီး ( အကြွင်း ) ရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ၁၃၄ဝ ခုနှစ်မှာ မွေးတဲ့ အမျိုးသားကိုတွက်ပါမယ်…။
၁၃၄ဝ x ၄ = ၅၃၆ဝ ရပါတယ်…။
၅၃၆ဝ ကို ( ၇ ) နဲ့ စားတော့ အကြွင်း ( ၅ ) ရပါတယ်…။
သူငယ်ချင်းတို့ လည်း တွက်ကြည့်ပြီး အကြွင်းရှာကြည့်နော်။ ရလာတဲ့ အကြွင်းကို မှတ်ပြီး အောက်မှာ အဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါဦး။
* အကြွင်း ( ၁ ) *
အကြွင်း ( ၁ ) ရခဲ့ရင်တော့ လက်မထောင်လိုက်ပါ။ ဖိုးကံကောင်းလေးပေါ့။ ကိုယ်ရမဲ့ မိန်းကလေးက အပြစ်ကင်းသူလေးပါ။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့သူပါ။ အေးတဲ့နေရာမှာတော့ ရေခဲက ဆရာခေါ်ရေ အာင်ပါပဲ။ ရည်းစားတောင် ထားရကောင်းမှန်း မသိတဲ့သူပါ။ အလုပ်တဖက်၊ ပညာတဖက်နဲ့ ဘဝသမားေ လးပါ။ ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစနဲ့ နေနိုင်တဲ့သူ၊ သွက်သွက်လက်လက် နဲ့ မိန်းမဆန်တယ်။ ခေတ်မီပေမဲ့ ခေတ် မဆန်ဘူး။ သဝန်လေးတော့ ကြောင်တတ်တယ်။ သူ့ရှေ့မှာ မိန်းကလေးအကြောင်းတော့ ယောင် လို့ တောင်မပြောမိစေနဲ့ ချော့ရတာမောသွားမယ်။ သူများတွေနဲ့ ကျရင် လူကြီးဆန်ပြီး ကိုယ့်အပေါ်ကျေ တာ့ ကလေးဆန်လွန်းလို့မိဘတွေတောင် အမြင်မကြည်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အပေါ်မှာတော့ သစ္စာရှိ သူလေးပါနော်…။
* အကြွင်း ( ၂ ) *
အကြွင်း ( ၂ ) ရခဲ့ရင်တော့ အချစ်ဆိုတာ ပေးဆပ်ခြင်းလို့ သာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိုက်ပါတော့။ ကိုယ်ကတော့ အချစ်သူရဲကောင်း ကြီးပေါ့။ မေတ္တာတရားအပြည့်နဲ့ခွင့်လွှတ်ကြင်နာတတ်တဲ့သူပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ တွေ့ မဲ့ မိန်းကလေးက တခြားသူကြောင့် အသဲကွဲေ ဝဒနာ ခံစားနေရသူလေးပါ။ သူ့ အကြောင်းကို မချွင်းမချန် ရင်ဖွင့်လာမဲ့သူပေါ့။ ကိုယ်ကကရုဏာ အပြည့်နဲ့ စီးကြိုမဲ့သူပါ။ သူက လည်း အတိတ်လူဆီကို စိတ်မညွတ်ပဲ သစ္စာရှိမဲ့ မိန်းကလေးပါ။ အလွန်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်တာဝန် ကျေ ပွန်တဲ့ အိမ်ရှင်မတယောက်ပါ။ အချောအလှလေးကလည်း ဖြစ်ဦးမှာ။ ရုပ်ဆင်းရူပါကတော့ လူတကာငေး ရလောက်တဲ့ သူနော်။ အိမ်ထောင်ထိန်းတော်ပြီး ကိုယ့်မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေလို့ နောက် ဆို ကိုယ်က သမက်လို့ တောင် အထင်ခံရလိမ့်မယ်နော်။
* အကြွင်း ( ၃ ) *
အကြွင်း ( ၃ ) ရခဲ့ရင်တော့ တော်တော်ကြီးမဲ့သူပဲ။ ( တမျိုးမတွေးနဲ့ ဦး ဆွေကြီးမျိုးကြီး၊ မာနကြီး၊ စိတ်ကြီး၊ ဒေါသကြီး စတဲ့ * ကြီး * တွေကို ပိုင်ထားတဲ့ မမကြီးကိုပြောတာ ) ပကာသန အသိုင်းအဝိုင်းကြားကလာလို့ နှလုံးသားလှပေမဲ့ ဘုကျကျ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ တော်ရုံကို အဖက်မ လုပ်တတ်တဲ့ သူမျိုး။ ပညာတက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ရပ်တည်နိုင်တဲ့သူ။ ကိုယ်နဲ့အိမ်ထောင်ကျြ ပီးလည်း ကိုယ့်အသိုင်းဝိုင်းထဲ ဝင်လာမဲ့သူမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကပဲ သူ့ အသိုင်းဝိုင်းထဲ ဝင်ရလိမ့်မယ်။ အနိုင်ကျင့်တဲ့ ဝါသနာတော့ရှိတယ်။ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းတောင် အကောင်းစားလေးတွေ မှ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံလိမ့်မယ်။ ခပ်ညံ့ညံ့ အပေါင်းအသင်းမျိုးဆို အိမ်လာလည်တာတောင် လက်သင့်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်ကံကောင်းပါတယ်။ သူ့ ကြောင့်ပဲ တိုးတက်မှုတွေရလာလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ယော ကျာင်္းတယောက်နောက်မှာ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမရှိတယ်ဆိုတာ မျိုးပေါ့။
* အကြွင်း ( ၄ ) *
အကြွင်း ( ၄ ) ရခဲ့ရင်တော့ တော်ဝင်သူလေးပါ။ အသိုင်းဝိုင်းကြီးထဲကနေ အချစ်တွက် အရာရာကို စွန့်လွှ တ်ပြီး ကိုယ့်ဘဝ ထဲ ရောက်လာမဲ့သူလေးပါ။ လေးစားလောက်စရာ လူမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝအတွေ့အကြုံနည်းပြီး၊ ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ သဇင်ပန်းလို မိန်းမသား နဲ့ အိမ်ထောင်ကျလို့ သူငယ်ချင်းများက မုဒိတာပွားကြပါလိမ့်မယ်။ အလွန် သီးခံတတ်၊ ခွင့်လွှတ်တတ်ပေမဲ့ မဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့ တော်တော်ကို ပွဲကြမ်းမဲ့သူ မာနခဲမလေးပါ။ မိဘတွေနဲ့ လည်း အဆင်ပြေပါလိမ့် မယ်။ အပေးကမ်လည်း ရက်ရောပါတယ်။ အရာရာ ကိုယ့်သဘောပါ။ အဲ… နောက်တယောက်တော့ စိတ်နဲ့ တောင် ရှုတ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့ ကွာရှင်းစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးပြီးသားနော်။ သဘောထားကြီးပေမဲ့ ဒါမျိုးေ တာ့ ခွင့်မလွှတ်တတ် ဘူး။ အပြင်အလုပ် ထွက်လုပ်ရင်တောင် အိမ်ထောင်မှု မလစ်ဟင်းစေရတဲ့သူမျိုးပါ။ မိန်းမရ ကံကောင်းပါတယ်။
* အကြွင်း ( ၅ ) *
အကြွင်း ( ၅ ) ရခဲ့ရင်တော့ ဆိုရှယ်မမပဲ။ ခေတ်ထက်ကို ရှေးကပြေးနေတဲ့ သူလေ။ ဟော့ေ ရှာ့လို့ ပြောရမလား? အလန်းဇယား လို့ ပြောရမလား? ( ရုပ်ရှင် ကြော်ငြာဝင်တာ မဟုတ်ပါ ) အတော်ကို စတိုင်မိတဲ့ မလိုင်ခဲမမနော်။ ပြင်ဆင်ထားပုံများကတော့ မားကတ်မှာ အလှပြထားတဲ့ ကော်ပတ်ရုပ်နဲ့ နင် လား၊ ငါလားပဲ။ ရည်းစားများတာလား? လာမပြောနဲ့ ရှင့်တောင်သနား လို့ ယူထားတာနော်။ လွတ်လပ်မှု ကို မြတ်နိုးပြီး ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ နေချင်တဲ့သူ။ သွားများ မပြောမိစေနဲ့ ကိုယ့်ကို ပြန် တရားဟောသွား လိမ့်မယ်။ သူ့ ကျေးဇူးနဲ့ နိုင်ငံခြားလည်းရောက်ဦးမယ်။ ပညာတော်သင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ အလုပ်လုပ် ဖို့အတင်းလွှတ်လိုက်တာ။ ပစ္စည်းဆိုလည်း အကောင်းစားမှသုံးတာ။ အစားအသောက်ဆိုလည်း ထမင်း ချက် ကောင်းကောင်း ခန့် ထားပေးရမယ်။ သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သူ့ ပုံစံ အတိုင်း ကိုယ်ပါမျောပါသွား လို့ သူငယ်ချင်းတွေ လမ်းတွေ့ ရင်တောင် မမှတ်မိဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
* အကြွင်း ( ၆ ) *
အကြွင်း ( ၆ ) ရခဲ့ရင်တော့ မေတ္တာတရား ကြီးမားတဲ့သူပါ။ တယောက်အကြောင်း တယောက်သိတဲ့ သူငယ်ချင်းလို၊ မိတ်ဆွေလိုကနေ အဆင့်တက် သွားမှာပါ။ သူနဲ့ အိမ်ထောင်မကျခင် ကိုယ့်မှာရည်းစား ရှိခဲ့တာလည်း သူကသိနှင့်ပြီးသားပါ။ မမျှော်လင့်ပဲ သံယောဇဉ်တွယ်ပြီး ချစ်သွားကြမှာ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး သူ့ မေတ္တာရိပ်အောက်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေရမှာပါ။ ဆိုးတိုင်ပင်၊ ကောင်းတိုင်ပင် နှစ်ယောက်သား အတူသွား၊ အတူလာ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ သဘောထားကြီးပြီး အရမ်းချစ်တက်တဲ့ မိန်းကလေးပါ။ နားလည်မှု ရှိပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်ပြေမဲ့သူပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် ကိုယ့်အလုပ်တွေကို ဝိုင်းကူပြီး ကြီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးတွေ လုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အတွက် အရာအားလုံး သူ့ လက်သူ့ ခြေနဲ့ ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးရ မှ ကျေနပ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ သင့်ကို သူငယ်ချင်းတွေ ဝိုင်းပြီး အားကျနေလိမ့်မယ်။
* အကြွင်း ( ဝ ) *
အကြွင်း ( ဝ ) ရခဲ့ရင်တော့ တော်တော်လေး ထူးခြားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ထက် တခုခုကြီးတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျလိမ့်မယ်။ ( အသက်တို့ ပညာတို့ ဂုဏ် တို့ ကို ပြောတာနော် ) သဘောမတူတာမျိုး လည်း ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပေါ်မှာ အလိုလိုက် လိမ့်မယ်။ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ စိတ်မချဖြစ်တက်တယ်။ သူများ ပစ်သွား မလားဆိုတဲ့ ဆိုးရိမ်စိတ်လေး နဲ့ အလှတော့ အတော်ပြင်မဲ့သူပဲ။ ကိုယ့်အပေါ်မှာ မိခင်မေတ္တာမျိုးနဲ့ ချစ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဆိုးသမျှ အနွံတာ ခံပြီးသူစိတ်အလိုမကျရင်တော့ မျက်ရည်လေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ ရမဲ့ အခက်အခဲတွေကို လက်တွဲမဖြုတ်ပဲ ရင်ဆိုင်ပေးမဲ့သူမျိုးပေါ့။ ခေတ်ပညာတက်ပြီး အစွမ်းအစရှိတဲ့သူ၊ ဆရာလုပ် အမိန့် ပေးနိုင်တဲ့သူပါ။
မြန်မာသက္ကရာဇ်မသိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တွတ်နည်းတခုသင်ပေးလိုက်မယ်။ အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ်ထဲ က 638 ကိုနုတ်လိုက်ပါ။
ဥပမာ – 1982 မွေးတဲ့သူဆို 638 နုတ်လိုက်ရင် ၁၃၄၄ မြန်မာသက္ကရာဇ်ရပါတယ်။
တခုမှတ်ထားရမှာက မြန်မာသက္ကရာဇ်ကို တန်ခူးလကစတာမို့ လို့၁လ၊ ၂လ၊ ၃လပိုင်းနဲ့ ၎လပိုင်း သင်္ကြန် မတိုင်ခင် မွေးတဲ့သူများကတော့ ရတဲ့အဖြေကို ( ၁ ) တိုးယူပါ။ ၁၃၄၄ တို ၁၃၄၃ ပေါ့။
ဘယျလို မိနျးခလေးမြိုးနဲ့ ဖူးစာကံပါမလဲ ဆိုတာ သိရှိနိုငျဖို့ ယောကျြားလေးအတှကျ ရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့ အနာဂတျခနျ့မှနျးကို ဝမြှေလိုကျပါတယျ။ ကဲ…ဆနျးစဈကွညျ့လိုကျရအောငျ။
မိမိမှေးသက်ကရာဇျသိရုံနဲ့တှကျလို့ရပွီ။ မွနျမာသက်ကရာဇျ ဖွဈရမယျနျော။ မိမိမှေးသက်ကရာဇျကို ( ၄ ) နဲ့မွှောကျ၊ ရလာတဲ့ အဖွကေို ( ၇ ) နဲ့စားပွီး ( အကွှငျး ) ရှာရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ – ၁၃၄ဝ ခုနှဈမှာ မှေးတဲ့ အမြိုးသားကိုတှကျပါမယျ…။
၁၃၄ဝ x ၄ = ၅၃၆ဝ ရပါတယျ…။
၅၃၆ဝ ကို ( ၇ ) နဲ့စားတော့ အကွှငျး ( ၅ ) ရပါတယျ…။
သူငယျခငျြးတို့လညျး တှကျကွညျ့ပွီး အကွှငျးရှာကွညျ့နျော။ ရလာတဲ့ အကွှငျးကို မှတျပွီး အောကျမှာ အဖွရှောကွညျ့လိုကျပါဦး။
* အကွှငျး ( ၁ ) *
အကွှငျး ( ၁ ) ရခဲ့ရငျတော့ လကျမထောငျလိုကျပါ။ ဖိုးကံကောငျးလေးပေါ့။ ကိုယျရမဲ့ မိနျးကလေးက အပွဈကငျးသူလေးပါ။ ကိုယျကငျြ့သိက်ခာနဲ့ပွညျ့စုံတဲ့သူပါ။ အေးတဲ့နရောမှာတော့ ရခေဲက ဆရာချေါရေ အာငျပါပဲ။ ရညျးစားတောငျ ထားရကောငျးမှနျး မသိတဲ့သူပါ။ အလုပျတဖကျ၊ ပညာတဖကျနဲ့ဘဝသမားေ လးပါ။ ကိုယျပိုငျ အစှမျးအစနဲ့နနေိုငျတဲ့သူ၊ သှကျသှကျလကျလကျ နဲ့မိနျးမဆနျတယျ။ ခတျေမီပမေဲ့ ခတျေ မဆနျဘူး။ သဝနျလေးတော့ ကွောငျတတျတယျ။ သူ့ရှမှေ့ာ မိနျးကလေးအကွောငျးတော့ ယောငျ လို့တောငျမပွောမိစနေဲ့ခြော့ရတာမောသှားမယျ။ သူမြားတှနေဲ့ကရြငျ လူကွီးဆနျပွီး ကိုယျ့အပျေါကြေ တာ့ ကလေးဆနျလှနျးလို့ မိဘတှတေောငျ အမွငျမကွညျဖွဈလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့အပျေါမှာတော့ သစ်စာရှိ သူလေးပါနျော…။
* အကွှငျး ( ၂ ) *
အကွှငျး ( ၂ ) ရခဲ့ရငျတော့ အခဈြဆိုတာ ပေးဆပျခွငျးလို့သာ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့လိုကျပါတော့။ ကိုယျကတော့ အခဈြသူရဲကောငျး ကွီးပေါ့။ မတ်ေတာတရားအပွညျ့နဲ့ ခှငျ့လှတျကွငျနာတတျတဲ့သူပေါ့။ ကိုယျနဲ့တှမေဲ့ မိနျးကလေးက တခွားသူကွောငျ့ အသဲကှဲေ ဝဒနာ ခံစားနရေသူလေးပါ။ သူ့အကွောငျးကို မခြှငျးမခနျြ ရငျဖှငျ့လာမဲ့သူပေါ့။ ကိုယျကကရုဏာ အပွညျ့နဲ့စီးကွိုမဲ့သူပါ။ သူက လညျး အတိတျလူဆီကို စိတျမညှတျပဲ သစ်စာရှိမဲ့ မိနျးကလေးပါ။ အလှနျသာယာတဲ့ အိမျထောငျရေး ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျတာဝနျ ကြေ ပှနျတဲ့ အိမျရှငျမတယောကျပါ။ အခြောအလှလေးကလညျး ဖွဈဦးမှာ။ ရုပျဆငျးရူပါကတော့ လူတကာငေး ရလောကျတဲ့ သူနျော။ အိမျထောငျထိနျးတျောပွီး ကိုယျ့မိဘ အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့လညျး အဆငျပွလေို့နောကျ ဆို ကိုယျက သမကျလို့တောငျ အထငျခံရလိမျ့မယျနျော။
* အကွှငျး ( ၃ ) *
အကွှငျး ( ၃ ) ရခဲ့ရငျတော့ တျောတျောကွီးမဲ့သူပဲ။ ( တမြိုးမတှေးနဲ့ဦး ဆှကွေီးမြိုးကွီး၊ မာနကွီး၊ စိတျကွီး၊ ဒေါသကွီး စတဲ့ * ကွီး * တှကေို ပိုငျထားတဲ့ မမကွီးကိုပွောတာ ) ပကာသန အသိုငျးအဝိုငျးကွားကလာလို့နှလုံးသားလှပမေဲ့ ဘုကကြ ဆကျဆံတတျတဲ့ သူမြိုးပါ။ တျောရုံကို အဖကျမ လုပျတတျတဲ့ သူမြိုး။ ပညာတကျပွီး ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးနဲ့ရပျတညျနိုငျတဲ့သူ။ ကိုယျနဲ့ အိမျထောငျကြွ ပီးလညျး ကိုယျ့အသိုငျးဝိုငျးထဲ ဝငျလာမဲ့သူမြိုး မဟုတျဘူး။ ကိုယျကပဲ သူ့အသိုငျးဝိုငျးထဲ ဝငျရလိမျ့မယျ။ အနိုငျကငျြ့တဲ့ ဝါသနာတော့ရှိတယျ။ ကိုယျ့အပေါငျးအသငျးတောငျ အကောငျးစားလေးတှေ မှ ပေါငျးသငျး ဆကျဆံလိမျ့မယျ။ ခပျညံ့ညံ့ အပေါငျးအသငျးမြိုးဆို အိမျလာလညျတာတောငျ လကျသငျ့ခံမှာ မဟုတျဘူး။ ဒါပမေဲ့ အိမျထောငျကံကောငျးပါတယျ။ သူ့ကွောငျ့ပဲ တိုးတကျမှုတှရေလာလိမျ့မယျ။ အောငျမွငျတဲ့ ယော ကြာင်္းတယောကျနောကျမှာ ထကျမွကျတဲ့ မိနျးမရှိတယျဆိုတာ မြိုးပေါ့။
* အကွှငျး ( ၄ ) *
အကွှငျး ( ၄ ) ရခဲ့ရငျတော့ တျောဝငျသူလေးပါ။ အသိုငျးဝိုငျးကွီးထဲကနေ အခဈြတှကျ အရာရာကို စှနျ့လှ တျပွီး ကိုယျ့ဘဝ ထဲ ရောကျလာမဲ့သူလေးပါ။ လေးစားလောကျစရာ လူမြိုးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဘဝအတှေ့ အကွုံနညျးပွီး၊ ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြး ၊ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံနဲ့ နထေိုငျခဲ့တဲ့သူပါ။ သဇငျပနျးလို မိနျးမသား နဲ့အိမျထောငျကလြို့သူငယျခငျြးမြားက မုဒိတာပှားကွပါလိမျ့မယျ။ အလှနျ သီးခံတတျ၊ ခှငျ့လှတျတတျပမေဲ့ မဟုတျတာလုပျရငျတော့ တျောတျောကို ပှဲကွမျးမဲ့သူ မာနခဲမလေးပါ။ မိဘတှနေဲ့လညျး အဆငျပွပေါလိမျ့ မယျ။ အပေးကမျလညျး ရကျရောပါတယျ။ အရာရာ ကိုယျ့သဘောပါ။ အဲ… နောကျတယောကျတော့ စိတျနဲ့တောငျ ရှုတျဖို့မစဉျးစားနဲ့ကှာရှငျးစာခြုပျ လကျမှတျထိုးပွီးသားနျော။ သဘောထားကွီးပမေဲ့ ဒါမြိုးေ တာ့ ခှငျ့မလှတျတတျ ဘူး။ အပွငျအလုပျ ထှကျလုပျရငျတောငျ အိမျထောငျမှု မလဈဟငျးစရေတဲ့သူမြိုးပါ။ မိနျးမရ ကံကောငျးပါတယျ။
* အကွှငျး ( ၅ ) *
အကွှငျး ( ၅ ) ရခဲ့ရငျတော့ ဆိုရှယျမမပဲ။ ခတျေထကျကို ရှေးကပွေးနတေဲ့ သူလေ။ ဟော့ေ ရှာ့လို့ပွောရမလား? အလနျးဇယား လို့ပွောရမလား? ( ရုပျရှငျ ကွျောငွာဝငျတာ မဟုတျပါ ) အတျောကို စတိုငျမိတဲ့ မလိုငျခဲမမနျော။ ပွငျဆငျထားပုံမြားကတော့ မားကတျမှာ အလှပွထားတဲ့ ကျောပတျရုပျနဲ့နငျ လား၊ ငါလားပဲ။ ရညျးစားမြားတာလား? လာမပွောနဲ့ရှငျ့တောငျသနား လို့ယူထားတာနျော။ လှတျလပျမှု ကို မွတျနိုးပွီး ကိုယျပိုငျအစှမျးအစနဲ့နခေငျြတဲ့သူ။ သှားမြား မပွောမိစနေဲ့ကိုယျ့ကို ပွနျ တရားဟောသှား လိမျ့မယျ။ သူ့ကြေးဇူးနဲ့နိုငျငံခွားလညျးရောကျဦးမယျ။ ပညာတျောသငျတော့ မဟုတျဘူး။ အလုပျလုပျ ဖို့ အတငျးလှတျလိုကျတာ။ ပစ်စညျးဆိုလညျး အကောငျးစားမှသုံးတာ။ အစားအသောကျဆိုလညျး ထမငျး ခကျြ ကောငျးကောငျး ခနျ့ထားပေးရမယျ။ သူနဲ့အိမျထောငျကပြွီး သူ့ပုံစံ အတိုငျး ကိုယျပါမြောပါသှား လို့သူငယျခငျြးတှေ လမျးတှရေ့ငျတောငျ မမှတျမိဖွဈနလေိမျ့မယျ။
* အကွှငျး ( ၆ ) *
အကွှငျး ( ၆ ) ရခဲ့ရငျတော့ မတ်ေတာတရား ကွီးမားတဲ့သူပါ။ တယောကျအကွောငျး တယောကျသိတဲ့ သူငယျခငျြးလို၊ မိတျဆှလေိုကနေ အဆငျ့တကျ သှားမှာပါ။ သူနဲ့အိမျထောငျမကခြငျ ကိုယျ့မှာရညျးစား ရှိခဲ့တာလညျး သူကသိနှငျ့ပွီးသားပါ။ မမြှျောလငျ့ပဲ သံယောဇဉျတှယျပွီး ခဈြသှားကွမှာ။ အိမျထောငျကပြွီး သူ့မတ်ေတာရိပျအောကျမှာ အေးအေးခမျြးခမျြးနရေမှာပါ။ ဆိုးတိုငျပငျ၊ ကောငျးတိုငျပငျ နှဈယောကျသား အတူသှား၊ အတူလာ ဖွဈလာလိမျ့မယျ။ သဘောထားကွီးပွီး အရမျးခဈြတကျတဲ့ မိနျးကလေးပါ။ နားလညျမှု ရှိပွီး ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြနဲ့အဆငျပွမေဲ့သူပါ။ အိမျထောငျကပြွီးနောကျ ကိုယျ့အလုပျတှကေို ဝိုငျးကူပွီး ကွီးပှားရေး၊ စီးပှားရေးတှေ လုပျဖွဈပါလိမျ့မယျ။ သငျ့အတှကျ အရာအားလုံး သူ့လကျသူ့ခွနေဲ့ကိုယျတိုငျ လုပျပေးရ မှ ကနြေပျတဲ့ သူမြိုးပါ။ သငျ့ကို သူငယျခငျြးတှေ ဝိုငျးပွီး အားကနြလေိမျ့မယျ။
* အကွှငျး ( ဝ ) *
အကွှငျး ( ဝ ) ရခဲ့ရငျတော့ တျောတျောလေး ထူးခွားတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ပိုငျဆိုငျရပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့ထကျ တခုခုကွီးတဲ့ မိနျးကလေးမြိုးနဲ့အိမျထောငျကလြိမျ့မယျ။ ( အသကျတို့ပညာတို့ဂုဏျ တို့ကို ပွောတာနျော ) သဘောမတူတာမြိုး လညျး ဖွဈတကျပါတယျ။ ကိုယျ့ပျေါမှာ အလိုလိုကျ လိမျ့မယျ။ အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့စိတျမခဖြွဈတကျတယျ။ သူမြား ပဈသှား မလားဆိုတဲ့ ဆိုးရိမျစိတျလေး နဲ့အလှတော့ အတျောပွငျမဲ့သူပဲ။ ကိုယျ့အပျေါမှာ မိခငျမတ်ေတာမြိုးနဲ့ခဈြလိမျ့မယျ။ ကိုယျဆိုးသမြှ အနှံတာ ခံပွီးသူစိတျအလိုမကရြငျတော့ မကျြရညျလေး ကလယျကလယျနဲ့ဖွဈလိမျ့မယျ။ ဘဝမှာ ကွုံတှရေ့မဲ့ အခကျအခဲတှကေို လကျတှဲမဖွုတျပဲ ရငျဆိုငျပေးမဲ့သူမြိုးပေါ့။ ခတျေပညာတကျပွီး အစှမျးအစရှိတဲ့သူ၊ ဆရာလုပျ အမိနျ့ပေးနိုငျတဲ့သူပါ။
မွနျမာသက်ကရာဇျမသိတဲ့ သူငယျခငျြးတှအေတှကျ တှတျနညျးတခုသငျပေးလိုကျမယျ။ အင်ျဂလိပျသက်ကရာဇျထဲ က 638 ကိုနုတျလိုကျပါ။
ဥပမာ – 1982 မှေးတဲ့သူဆို 638 နုတျလိုကျရငျ ၁၃၄၄ မွနျမာသက်ကရာဇျရပါတယျ။
တခုမှတျထားရမှာက မွနျမာသက်ကရာဇျကို တနျခူးလကစတာမို့လို့ ၁လ၊ ၂လ၊ ၃လပိုငျးနဲ့၎လပိုငျး သင်ျကွနျ မတိုငျခငျ မှေးတဲ့သူမြားကတော့ ရတဲ့အဖွကေို ( ၁ ) တိုးယူပါ။ ၁၃၄၄ တို ၁၃၄၃ ပေါ့။